Sidee ayuu u dhintay hoggaamiyihii "Al Shabaab" ee Mozambique - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Francis Hanekom/Facebook
Image caption Andre Hanekom iyo xaaskiisa waxay sannado badan ku noolaayeen waqooyiga dalka Mozambique
Ganacsade u dhashay dalka Koonfur Afrika oo loo heystay dacwad ah inuu argagixiso ahaa ayaa ku dhintay xabsi, waxaana looga shakiyay in la sumeeyay, sida gabadhiisa ay u sheegtay BBC.
Gabadhiisa waxay sheegtay in Sabtidii uu ku xanuunsaday xabsi ku yaalla Pemba, waxaa uu dhintay ka hor inta aysan bilaaban dacwadda loo heystay sii loo caddeeyo dambiyada loo haysta.
BBC oo la xiriitay booliska, waxay sheegeen in aanan lagu wargelin geerida Hanekom isla markaasna aysan ka hadli karin.
"Qoyskeyga wuu dhibaateysan yahay, waxaan isku daynay muddoo lix bilood ah in aan caddeyno inuu yahay qof aanan wax dambi ah geysanin balse waa uu naga baxay, dhageysiga dacwaddiisa waxaa lagu waday toddobaadkan" ayay tiri gabadha Hanekom.
Maxaa sababay in Al-Shabaab ay soo rogaal celiyaan?
"Haddii ciidammada aysan sugaynin ammaanka, na hubeeya aan iska difaacne Al Shabaab"
"Aaabahay waxaa uu ahaa nin wanaagsan, wuxuuu ahaan nin daacad ah, qoyskiisa ku kala nool Mozambique iyo Koonfur Afrika wax weyn ayuu u taray, waxaan doonaya in adduunka uu arrintaasi la socda" ayay tiri.
Maxaa lagu heystay?
Bishan Janaayo, xafiiska dacwad oogaha ee magaalada Cabo Delgado ayaa Hanekom iyo labo qof u dhashay dalka Tanzania sheegay inay yihiin hoggaamiyeyaasha kooxda jihaad doonka ee ka dagaalanta dalka Mozambique, maleeshiyaadka hubeysan ayaa muddo ka badan sannad argagax ku hayay shacabka ku nool gobolka qaniga ku ah shidaalka ee waqooyiga dalkaasi.
Image caption Xeebta Palma ee waqooyiga Mozambique waxay qani ku tahay kheyraadka
Hanekom ayaa la sheegay in bil kasta uu mushaar ahaan u siin jiray maleeshiyaadka lacaga gaareyso 164 doolar, sida uu sheegay dacwad oogaha.
Laanta dambi baarista ee dalka Mozambique waxay sheegtay in guriga Hanekom ay ka heleen waxyaabaha qarxa, Baangado, qaansooyin, fallaar iyo hub.
Hubkan laga helay gurigiisa ayaa waxay caddeyn u tahay eedeymaha loo haysta ee ah inuu maalgelinayay iyo uu hagayay weerarada kooxaha maleeshiyaadka, sida uu sheegay xafiiska dacwad oogaha.
Maleeshiyaadka ayaa doonayay in dowlad madaxbannaan ay ka hirgeliyaan waqooyiga Mozambique iyo koonfurta Tanzania halkaas oo ah dhul kheyraad leh.
Maxay yirhaadeen qoyska?
Xaaska Hanekom, Francis, oo u ololeyneysay in la sii daayo ayaa waxbo kama jiraan ku tilmaantay eedaha loo heystay.
Waxay sheegtay inay ku noolaayeen magaalada Palma muddo 30 sanno ah halkaasina howlo ganacsi ay ka wateen balse aysan damac ah ka gelin siyaasadda dalkaasi.
Andrie Hanekom waxay sheegtay in aabaheed uu xanuunsaday , saraakiisha xabsiga ayaa daqiiqado yar u ogolaaday hooyadeed inay aragto aabaheeda oo xannuunsanaa.
Qoyska waxay sheegeen inay hayeen caddeymo dhowr ah oo muujinayo in uusan wax dambi gelin aabahood.,
Waa kuma maleeshiyaadka?
Waxay weerarro la beegsadeen tuulooyin iyo ciidamo ku sugnaa magaalada Cabo Delgado tan iyo bishii Oktoobar sannadkii 2017-kii.
Image caption Militariga Mozambique waxay howlgal ka wadaan waqooyiga dalkaasi tan iyo markii weerarada ay bilaawdeen
Dadka deegaanka waxay u yaqaannaan magaca Al-Shabaab, ururka ayaa la aasaasay sannadkii 2015-kii, wax xiriir lama laheyn Shabaabka ka dagaalama Soomaaliya.
Waxaa la rumeysan yahay in xubnihii ugu horreeyay ee ururka ay taabacsanayeen waddaad xagjir ah oo u dhashay dalka Kenya oo la dilay sannadkii 2012-kii.
Ururka ayaa ku baahay koonfurta, waxaa ay gaareen deegaanka Kibiti ee dalka Tanzania oo ku dhaw xadka Mozambique. waxaa sidoo kale la rumeysan yahay in ururka uu maalayin lacago ah ay kasoo gasho ka gancsiga Alwaaxda iyo macddanta.
Weerarada ay qaadeen maleeshiyaadka ka dagaalama Mozambique waxaa ku dhintay dad kaban 150 qof halka 600 guri dab la qabadsiiyay.